Apple mmelite buut Camp iji dozie nsogbu nke ụda nke ọhụrụ MacBook Pro | Esi m mac
Apple mmelite buut Camp iji dozie nsogbu ụda nke MacBook Pros ọhụrụ
Mgbe mwepụta nke ọhụrụ MacBook Pro na Touch Bar na ụlọ ọrụ Cupertino gosipụtara na October 27, ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị na-akọ nsogbu dị iche iche na-arụ ọrụ, nhazi na ndi ozo, nsogbu ufodu ndi n’emebeghi n’oge gara aga. Otu n'ime ndị dọtara mmasị kachasị emetụta bụ Boot Camp, nke anyị nwere ike iwunye Windows na Mac anyị ma jiri ya dị ka a ga - asị na ọ bụ PC na - ekeghị igwe mebere, usoro nke na - erepịa ọtụtụ akụrụngwa yana nke ahụ n'ọtụtụ ọnọdụ ọ naghị arụ ọrụ dịka o kwesiri.
Ọ na-apụta na mgbe ị wụnye Boot Camp ndị ọkà okwu nke MacBook ọhụrụ ha bidoro ghagbọọ ụda niile dị n’igwe site n'aka ha, na-etinye ọnọdụ ha n'ihe egwu ebe ọ nwere ike imebi ya kpamkpam. Nsogbu a na-emetụta ndị ọrụ na-eji Boot Camp, ọ bụghị ndị na-eme igwe mebere iji rụọ Windows.
Ndị ọrụ ejirila ụdị mbụ nke Boot Camp ga-imelite aka na ihe nkedo na-edozi nsogbu okwu. Ndị ọrụ ahụ niile ejibeghị ya, ọ ga - eme ihe ọ bụla.
Apple na-ekwu na nsogbu ọgba aghara nke na-emetụta ndị ọrụ Boot Camp na Windows kwesịrị ịnwale ọzọ ma ọ bụrụ na ha enwee nsogbu ọ bụla ọzọ na iji macOS. Ọ bụrụ otu a, ha ga-aga Storelọ Ahịa Apple iji mụọ nsogbu ahụ na hụ ihe bụ azịza kachasị ọsọ nke Apple na-enye ndị niile emetụtaradị ka ndị ọrụ enweghị ụta maka nsogbu a. Ihe kachasị ezi uche dị na ya bụ na a na-edochi ndị na-ekwu okwu, ọ gwụla ma a na-agbanye ha na motherboard, nke ga-egosi MacBook Pro ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook Pro » Apple mmelite buut Camp iji dozie nsogbu ụda nke MacBook Pros ọhụrụ
Ndewo, afọ ole na ole gara aga, ekpebiri m iji ọkachamara Bootcamp iji nwee ike iji sistemụ arụmọrụ na MacBook Pro m, na-eburu n'uche na achọrọ m iji ụfọdụ mmemme na-arụ ọrụ na Windows. Azụrụ m Windows 10 na ihe niile adịla mma ruo otu izu gara aga. Ana m emelite mgbe niile macOS na Windows 10, na mgbe emelite ikpeazụ nke ikpeazụ, ụda macOS anaghịzi apụta na Windows 10 mgbe m jiri Bootcamp ịmalitegharị na macOS. Ntinye nhọrọ menu ụzọ mkpirisi na macOS na-enye m njehie ma gwa m na ọ nweghị ike ịchọta olu buutu macOS. Ebe ọ bụ na macOS elu Sierra Leone enweghị m nsogbu ịmalitegharị na Windows 10 n'ihi na ha dị m ka mpịakọta abụọ ahụ na nhọrọ diski buut nke Mmasị Sistem. Na Windows 10 M mepee Bootcamp akara panel na m na-na nhọrọ ka Malitegharịa ekwentị na Bootcamp.
Nanị ụzọ m nwere ike isi maliteghachi n'ime macOS bụ site na iji bootloader MacBook na reboot.
Ọ nwere onye ọ bụla nwere echiche ọ bụla ihe kpatara nke a nwere ike ime na otu esi edozi ya? Ana m ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị. Echiche kacha mma
Zaghachi Jesús Canseco
Ndị otu okike Apple na-etolite na Billy Sorrentino